कसको सम्भावना कस्तो ? जटिल समीकरण
कोलकाता नाइट राइडर्स र चेन्नई सुपर किंग्सबीचको खेल अगाडि इन्डियन प्रिमियर लिग २०२० मा सबै टिमले आफ्ना १२–१२ खेल खेलेका छन् । यो स्थितिमा पनि शीर्ष चार स्थानमा रहेर प्लेअफका लागि छनोट हुने टिमको ठ्याक्कै समीकरण तयार हुन सकेको छैन । मुम्बई इन्डियन्स बलियो स्थितिमा रहेको एक मात्र टिम हो भने चेन्नई सम्भावना सकिएको एक मात्र टिम । यस अर्थमा कसको सम्भावना कस्तो त ? समीकरण जटिल छ ।
मुम्बईको १२ खेलबाट १६ अंक छ र यो नै एक मात्र यस्तो टिम हो, जसबारे दाबी गर्न सकिन्छ, लगभग प्लेअफका लागि छनोट भइसकेको छ । मुम्बईले दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइज हैदराबादविरुद्ध खेल्न बाँकी छ । अहिलेसम्मको समीकरण अनुसार मुम्बई शीर्ष दुई मध्ये एक स्थानमा रहने छ, किनभने दिल्ली र रोयल च्यालेर्न्ज बेंग्लोरमध्ये एकै टिमको मात्र बढीमा १८ अंक हुन सक्छ । फेरि मुम्बईको नेट रनरेट पनि निकै राम्रो रहेको छ ।
रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरका दुई बाँकी खेलमध्ये पहिलो सनराइज हैदराबाद रहेको छ भने अन्तिम दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध छ । उसको १२ खेलबाट १४ अंक छ । आफ्नो पछिल्लो खेलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग पराजित रहे पनि बेंगलोर आरामले शीर्ष चारमा पर्ने देखिन्छ । उसले यसका लागि अन्तिम दुई खेलमध्ये एकमा जित निकाले पुग्छ । दुवै खेलमा पराजित रहेको खण्डमा पनि बेंग्लोर १४ अंकमा कायम रहनेछ र यति बेला अरू टिमको नतिजा निर्णायक हुन सक्नेछ ।
मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरविरुद्ध रहेका छन्, दिल्ली क्यापिटल्सका अन्तिम दुई खेल । उसको १२ खेलबाट १४ अंक छ । सनराइज हैदराबादविरुद्ध ठूलो अन्तरको हारले दिल्लीलाई केही अप्ठ्यारोमा पारेको हो । फेरि उसका बाँकी दुई खेल पनि शीर्ष स्थानका टिमविरुद्ध नै रहेको छ, जुन पक्कै सजिलो हुने छैन् । यसमध्ये एक खेलमा विजयी रहे पनि दिल्लीको छनोट सम्भावना कायम रहनेछ । यही १४ अंकले पनि दिल्लीलाई प्लेअफमा पुर्‍याउन सक्छ तर हैदराबादविरुद्धको जस्तो हार फेरि बेहोर्नु परे दाबेदार मानिएको टोली बाहिरिने छ ।
किंग्स इलेभेन पञ्जाब पछिल्लो समय खुबै लयमा छ र यसै कारणले त हो, उसले पछिल्ला पाँच खेल लगातार जितेको छ । यो जितको क्रमलाई सात खेल पुर्‍याउने हो भने पनि पञ्जाब प्लेअफका लागि योग्य हुनेछ । पञ्जाबको १२ खेलबाट १२ अंक छ र उसको नेट रनरेट पनि राम्रो छ । पञ्जाब अन्तिम दुई खेल विजयी रहे पनि, त्यो जितको अन्तर निकै साँघुरो रह्यो भने समीकरण जटिल र अनिश्चित हुन सक्छ । दुई मध्ये एक खेलमा हारे पनि पञ्जाबको सम्भावना समाप्त भने हुने छैन् । पञ्जाबले पुछारको दुई टोली राजस्थान र चेन्नईसँग खेल्न बाँकी छ ।
सनराइज हैदराबादका लागि प्लेअफ सम्भावनाको समीकरण स्पष्ट छ, उसले आफ्ना बाँकी दुई खेल जित्नु पर्‍यो, अनि आसमा रहनु पर्‍यो, १६ अंक छुन सक्ने पाँच टिममध्ये दुईले यस्तो आँकडा छुन नसकोस् । उसको नेट रनरेट पनि खासै नराम्रो छैन, त्यसैले यो हैदराबादका लागि सकारात्मक पक्ष हुनेछ । उसले आफ्ना अन्तिम दुई खेलमा बेंग्लोर र मुम्बईको सामना गर्नेछ । हैदराबादका लागि मुम्बईले बेंग्लोरलाई हराउनु राम्रो नतिजा रहेको छ । हैदराबाद अहिले १० अंकमा छ ।
राजस्थान रोयल्सको नेट रनरेट कमजोर छ, अझ नकारात्मक छ, त्यसैले सम्भवतः उसको सम्भावना अरूको तुलनामा कमजोर जस्तै छ । आफ्ना बाँकी दुई खेलमा उसको प्रतिद्वन्द्वी रहेको छ, किंग्स इलेभेन पञ्जाब र कोलकाता नाइट राइडर्स । अहिले उसको १० अंक छ । यदि राजस्थानको १४ अंक हुन्छ र नेट रनरेटको समीकरण आवश्यक परेन भने उसको छनोट सम्भावना बढ्न सक्छ । त्यस अर्थमा राजस्थानले सबैभन्दा पहिले बाँकी दुई खेल नै जित्नु पर्‍यो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।